Trump oo sheegay inuu Israel u hibeeyey dhulkii ay ka qabsatay Siiriya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Trump oo sheegay inuu Israel u hibeeyey dhulkii ay ka qabsatay Siiriya
March 26, 2019 - By: Khalid Yusuf
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay qoraal uu ku sheegay in Maraykanka uu u aqoonsaday Israel inay leedahay dhulka buuraleyda Golan Heights oo ka tirsan wadanka Siiriya.
Israel ayaa qabsatay qeybo kamid ah Golan Heights xiligii uu socday dagaalkii 1967dii, dhulkaasi oo ay illaa iyo hada maamulaan ayuu caalamka u aqoonsan yahay inuu yahay dhul ay xoog ku heysato oo ka tirsan wadanka Siiriya.
Trump ayaa doonaya in go’aankan uu ku taageero Raysalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ah saaxiibkiisa oo xiligan wajahaya doorasho adag oo ka dhaceysa Israel 9-ka bisha April, Netanyahu ayaa in muddo ah u ololeenaya in xulafadooda Maraykanka ay ku dhawaaqaan go’aankan sii uu ugu galo ololaha doorashadiisa.
Maamulka Trump ayaa horey u aqoonsaday in magaalada Qudus ay tahay caasimada Israel, go’aanadan oo ah kuwo ay cambaareeyeen Beesha Caalamka oo sheegtay inaysan waxna ka bedali doonin sharuucda caalamiga ah ee qeexaya lahaanshaha dhulkaasi.
Dowlada Siiriya oo dhankeeda arrintan qoraal kasoo saartay ayaa sheegtay in dhulka Golan Heights uu kamid yahay wadanka Siiriya, iyagoo ku tilmaamay Dowlada Maraykanka cadowga kowaad ee dalalka Carabta.
Wadanka Turkiga ayaa sidoo kale ku tilmaamay go’aanka Trump mid aan marnaba la aqbali doonin.
Jaamacada Carabta iyo dalka Qatar ayaa kamid ah dhinacyada arrintan ka hadlay iyagoo sheegay inuu dhulkaasi yahay (dhul Carbeed) oo ay Israel xoog ku heysato.
Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna sheegay in aysan waxna iska bedalin go’aankii UN-ta ee u aqoonsan dhulkaasi mid ka tirsan Siiriya oo ay Israel xoog ku heysato, sida ku qeexan qaraaradii horey uga soo baxay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay sanadkii 1981-dii.
Marka laga yimaado Taageerada Trump uu doonayo inuu u muujiyo xulafadiisa xagjirka Israel ee uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu, wuxuu sidoo kale Madaxweynaha Maraykanka doonayaa inuu go’aankan uu taageero uga helo xagjirka Kirishtaanka Maraykanka ee loo yaqaan Chirstian-Zionist ee doonaya in Israel noqoto dowlad awoodleh oo la wareegta dhulka Falastiin oo dhan iyagoo aaminsan in arrintan ay soo dadajin doonto dib usoo noqoshada Nebi Ciise CS.